TSY MAINTSY MIVERINA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC – MyDago.com aime Madagascar
TSY MAINTSY MIVERINA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC
Efa ela ela no tsy nikabary teny amin’ny kianjan’ny finoana Behoririkany Cst Fanatera Longin. Androany dia nanana anjara fitenena teny an-toerana ny tenany. Nambarany tamin’izany fa mitovy Rajoelina sy Remenabila satria samy manana hery sy matanjaka ary manana basy. Izay hoy izy no feon’ny vahoaka any Atsimo. Namaly ihany koa ny voalazan’andriamatoa Avimana ny tenany izy milaza fa tsy misy korontana any Atsimo. Isika koa hoy Longin dia manana masoivoho any an-toerana ka ny tenako anisan’izany izay mahita tsara ny fiainana any. Ny solontenan’ny Udrc sy Tgv hoy izy dia nilaza fa tsy manaiky ny NI Ni. Miasa Andriamanitra fa Rajoelina no miteny ny Ni Ni.. Noho izany dia rehefa tsy Ni Ni hoy Longin dia OUI OUI. Noho izany dia faka milatsaka daholo na iza na iza. Tsy io Ni Ni io no mampiditra krizy fa ny fifidianana ataon’olon-tokana. Midika izany hoy izy fa tsy maintsy miverina ny filoha Ravalomanana Marc. Tsy sitrapon-dRajoelina no nampiditra ny Ankolafy Ravalomanana tao fa ny tondrozotra. Ny Ct Rakotorahalahy Manga Louis avy any Bongolava kosa dia nitatitra tamin’ny vahoaka ny zavamisy any an-toerana. Vao tsy ela akory izay hoy izy izahay dia nankalaza ny festival de barahoa. Tapa-bolana mialoha anefa dia efa tany ekipan-dRajoelina naka hoe ahoana ny hevitry ny vahoaka. Iny faritra iny hoy Manga dia raha misy ny voalohany dia faharoa amin’ny fanohanana an’I dada. Rehefa tonga tany ireo ekipa ireo dia nanao tery vay manta ny sefom-pokontany hoe tsy maintsy manatrika ny rehetra. Ny nametrahana anay teo anaefa hoy izy dia tsy hikabary ho an-dRajoelina fa hoan’I dada. Voatsikera izahay hoy ity olomboantendry ity fa heo sy nanatrika tao. Gaga ny olona fa inona no hanaovana fotodrafitr’asa goavana toy ny Rn 33 snsns. Efa tapaka tao amin’ny parlemantera anefa fa atao io kanefa tetik’asan’I dada ihany io ahodinkodina io. Ankoatra izay dia nambarany fa mbola tsy voaloa ny karaman’ireo sefom-pokontany any a-toerana fa efa-bolana fotsiny. Ny hafatr’izy ireo dia hoe rahoviana I dada no ho avy fa tsy mila olona ohatra izany izahay. Nankahery ny vahoaka eto amin’ny Magro ny vahoaka any amin’iny faritra iny hoy ny Ct Manga.
VOT : NY FILOHA RAVALOMANANA MIVERINA SY MIROTSAKA NO VAHAOLANA
Tsy maintsy tafody izahay mianankavy, miverina ny ara-dalana, vao hisy ny fankatoavana hoy ny filoha Ravalomanana !
Auteur Solo Razafy*Publié le 28 novembre 2012 28 novembre 2012 Catégories Politique
8 pensées sur “TSY MAINTSY MIVERINA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC”
Asa na variana mikarakara ny Noely sahady ny namana mpitolona, fa dia hialako tsiny ry zareo rahatoa ka mba soloiko kely eto !
Toa somary lasa toy ny vady tsara trarehy peta-korona foana mantsy ity raharaha !
Tsy fanakianana ny ahy r’Ingahy Solo Razafy na ry zareo ao amin’ny magro, fa lasa dridrangilo ny zavatra voalaza tsindraindray !
Lohan-teny : « Tsy maintsy miverina ny Filoha Ravalomanana » !
Fa angaha ireo vahoaka ireo na ianareo mpitarika koa, tsy dia mihino an’izany loatra ? Efa fantatra anie fa tsy maintsy hiverina izy, na ho ela na ho aingana ê ! Tanindrazany io !
Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tena vonona hanao izay hiverenany marina ary aingana va ianareo, satria mandeha dia mandeha ny fotoana ? Efa ho efa-taona izao no manjàka ny dahalo, ary maneran’ny nosy ! Tsy misy fandriam-pahalemana na aiza na aiza ; tsy ny any atsimo ihany !
Na any anaty biraom-panjakàna aza feno dahalo !
Resaka Ni Ni !
Misy mihevitra any ho any fa rehefa tsy avela hilatsaka ilay mpanongana dia ho faly ny vahoaka, fa ny setrin’izany dia ny tsy fazahoan’ny Filoha Ravalomanana milatsaka ihany koa !
Fa nahoana ? Fa izy angaha nanao inona ? Ny Accord de Cotonou aza efa milaza fa tsy tokony handray anjara amin’ny famerenana ny ara-dalàna izay rehetra mpanongam-panjakàna. Isika malagasy ihany no manaikinaiky fahatanay izay lazain’ny sasany fa lalana tena tsara ! Ny azy aza, fifidianana prezidà-n’antoko kely ery dia efa lasa afera d’Etat !
Tsy tokony hilatsaka akory ilay kely io, noho ny antony maro dia maro, fa asa loatra maninona no ilay voahitsakitsaka indray no manafosafo sy miala tsiny !
Izany no atao hoe « syndrome de Stockholm ».
« Tsy sitrapon-dRajoelina no nampiditra ny Ankolafy Ravalomanana tao fa ny tondrozotra » !
Aza dia avadika ny resaka ê ! I Rajoelina no tokony tsy nahazo nihiditra tao amin’io tondrozotra io, satria mpanongam-panjakàna ! Noresen-dahatra ny Prezidà, ary nanaiky ny vahoaka matoa izy tafiditra tao ! Nanaiky tsy sazoka ny vahoaka satria nanohy ny habibiany ny miaramilan’ny mpanongana rehefa nitsangana ny vahoaka, ary niteny hoe « TSY EKENAY IZAO » ! Ireo mpanohana an’ilay mpanongana mody miatsara-velantsia, dia nametraka mora ny tetika ratsiny, asa nanantena inona ?
Efa hita daholo izao ny porofo rehetra, ary araky ny voalazan’ilay namana iray tamin’ny maraina, efa omena anareo ny baolina ary milaza ny olona hoe dakao amin’izay ! Ny baolina efa napetraka eo amin’ny toerana fandakàna penalty, ilay mpiambina vavahady efa nofatoran’ny CI ny tongony, ny CI miteny hoe alefaso amin’izay !
Miandry inona ?
Ataovy leo ilay solotenan’ny Vondrona eraopeana ! Ireo voalazanareo rehetra ireo sy izay zavatra hitanareo tsy mety rehetra amin’ny manaraka, dia ataovy amin’ny teny frantsay, ary atero eny aminy ISAN’ANDRO, ARY MANAOVA KÔPIA !
Mankahery anareo IHANY koa izahay, fa mba tena ataovy izay tokony atao, fa aza dia miandry fotsiny eo ê ! Tsy hoe rehefa niteny ny Filoha hoe 90% ny asa dia ahy fa ny ambiny no anareo, dia hanao sônagaly mahazo baiko fotsiny !
Mba tokony mihetsika toan-dRamatoa NAIKA Eliane daholo ianareo ao !
28 novembre 2012 à 21 h 23 min
il tant que les Malgaches s’occupent DE RAJOELINA ANDRY en personne ,s’occuper d’un tronc du mal ..
arretez de s’occuper de passeport d’un tel ou un tel .NY VOAMASONY NO PITSIRINA ou CREVER L ABCES QUI gangréne LA société malgache et masagascar. en la personne de RAJOELINA .
29 novembre 2012 à 6 h 04 min
TOKANONO dit :
29 novembre 2012 à 10 h 08 min
ATAOVY NY ANALIZY FA I DADA TSY HO AVY INTSONY E,RERAKA EO NAREO MPITABATABA ETO,FA I RAJOELINA TSY MAINTSY HO LANY 4 EME REPUBLIQUE NY ANTONY DIA TSOTRA,MIPETRA ATY SOUTH AFRIQUE NY TENAKO KA MORA HO AHY NY MAHAZO INFORMATION,EFA LEO NY MPITARIKA MPAMITAKA AO AMIN’NY MAGRO E,INTY TENA TSY RESAKA DIVERSION INTSONY FA RESAKA TENA MARINA,ARY EFA FANTATRY PRESIDENT RAVALOMANANA FA BE ANTITRA SISA NY ANKAMAROAN’NY MPITOLONA AO AMIN’NY MAGRO,TSY HITA INTSONY NY TANORA NOHO NY ATSOJAY ATAON’NY PARLEMENTAIRES KA ASAKASAKAREO E! AOKA MIHITSY IZAY INTY EXTREMISTE ITY FA RAHA HENDRY ISIKA AHONGANO rajoelina
29 novembre 2012 à 12 h 33 min
Andrinay foana na rahoviana na rahoviana ny dadanay eeeeeeeee
Raiso @ tongony roa domelina ary dia atsatoy @ tany eeeeeeee
Ary mihamihaja ihany izany mpitolona eny @ Magro izany marina!
tena mahavelombolo fa dia mankasitraka daholo Tompoko o!!!!!!
Tsy hadino Ravinanto!!!ho avy hanatevina anreo eny ny akama fa andraso kely, hanao be midina
eny izahay atsy ho atsy. Mandra-pihaona eny Ambohipihaonana ( Magro ) daholo ary Tompoko.
Hisintona sofina Mpitarika kely eo mihintsy aho fa misy manao BE MARENINA ! hihiiiiiiiii!!!
29 novembre 2012 à 12 h 49 min
Tsy mila TOKANONO izany ato ê ! Tsy alehany, indrindra raha pitaozy be ilay sisa tavela ! MDR !!
Ny toa izao aza mbola mila dinihina kely ihany, noho izany dia any amin’ny tokotanin’i ndefo milalao !
Lava bé ilay pejy telo teo aloha, fa tohizako eto ny hevitro.
Fihomanana be dia be ilay fanonganana io rangahy io.
Sady mila fiheritreretana ela (programmation), no mila mpitarika tsy matahotra.
Marina aloha fa betsatra no matahotra satria hisy famonoana olona hitranga rehefa hidina hidoroboka ny vahaoka.
Tsy hiverina ny Fanampianana Internationaly raha mbola eo io rangaha io.
Samy mahalala izany daholo, ary io no tokony ho voto-atiny voalohany entina hanaovana ilay fanonganana.
Satria ilaina mafy io fanampiana io.
Ny antony sisa manaraka, dia ny ao an-toerana ihany no tena mahalala izay tena ho lazaina – miaraka amin’ny POROFO –
Tsy ampy ireny porofo hitan’ny mpitsidika ireny satria nandà io rangaha io sy ny mpiaro azy fa tsy nisy ny famonoana tsy rariny.
Tsy maintsy mahita POROFO MARINA hafa (fa tsy lainga akory) ny mpitarika, ho fantatrin’ny mpitazana internationaly.
Ohatra : détournement de Fonds vers l’extérieur (ary mahatonga ny fahantrana mangirifiry), na importation d’armes à feu pour semer la terreur, na zavatra hafa izay misy ka fantatrareo.
Mbola averiko eto fa hisy ny famonoana olona raha mihetsika ny mpanongana.
Ary eo io fanjakana io no azo encerclé-na (épinglé) ho tazan’ny mpitazana internationaly.
Aza mifanilika ny gasy an-dafy sy an-toerana.
Raha ny hevitro dia aleho tsy hanao interpellation ny gasy ao frantsa, fa ny gasy ivelany an-dafy hafa ihany no tokony hihetsika.
Satria misy kely ny mahadiso azy ny gasy mitoetra ao frantsa
MICHEL :VONONA HANAO PARTICIPATION FINANCIERE MATANJKA IZAO ,IANAO ,ISIKA REHETRA ,tandremo emile VAZAHA.
Précédent Article précédent : RAVELOSON CONSTANT : MISOLOKY FAHEFANA RAJOELIN
Suivant Article suivant : MITOMANY HANAO BEN’NY TANANA RAJOELINA